बखत र प्रतिभा एकै साथ मिडियामा -खुल्यो नयाँ रहस्य ! (भिडियो हेर्नुस्) – NepalajaMedia
काठमाडौ । भाइरल जोडी बखत र प्रतिभाको बारेमा अहिले फेरी सामाजिक सञ्जालमा चर्चा सुरु भएको छ । एउटा यस्तो अचम्मको जोडीको अनपेक्षित वियोग भए पछि फेरी चर्चा सुरु भएको हो । उनीहरुको डिभोर्सको खबरले शुभचिन्तकहरु समेत चिन्तित भएका छन् । बच्चा भन्दा पनि सानो श्रीमान् भएका कारण यो जोडी सामाजिक सञ्जालमा चर्चित थियो ।
बखतले सार्वजनिक रुपमा आफुहरुको कुरा सार्वजनिक गरेको भएपनि प्रतिभाले भने केही बोलेकी थिइनन् । तर अहिले पहिलो पटक प्रतिभाले पनि सम्बन्ध विग्रिएको खुलासा गरेकी छन् । उनले अब बखतसंग बस्न नसक्ने बताएकी छन् ।
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, फाल्गुन १४ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextगायिका अञ्जु पन्तको बिहे पछी नायिका रीमा विश्वकर्माको दोस्रो विवाह तय, को हुन् हुनेवाला बेहुला ?
धेरै *यौ*न*सम्पर्क गरेकै कारण पृथ्वीबाटै हराउँदैछ यो जीव
होली पछिको महत्वपूर्ण पर्व खखडेहराका लागि प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिइयो